Semalt Expert: Manakana ny fifamoivoizana an-tserasera amin'ny Google Analytics indray mandeha
Raha mampiasa ny Google Analytics tsy tapaka ianao, dia mety te-hahafantatra ny fomba hahazoana ny fifamoivoizana amin'ny tranokalanao ianao. Raha mikasika ny fifamoivoizana marina dia misy fikarohana fanatsarana sy ny teknolojia ara-tsosialy hikarakarana. Vao haingana, nitatitra ny botsika sy ny kaonty fitakiana sandoka ho an'ny dimampolo isan-jaton'ny fifamoivoizana amin'ny tranokala mahazatra. Manantena izahay fa ny ankamaroan'ity fifamoivoizana ity dia hofoanana amin'ny Google Analytics miaraka amin'ny fitaovana sy teknika isan-karazany - state of minnesota long term care insurance.
Max Bell, manam-pahaizana manokana avy amin'ny Semalt , dia manome vahaolana mahasoa momba izany.
Misy botsika madinidinika sy botsa-pijery mahazatra izay mitazona ny tranokalanao sy ny votoatiny noho ny tebitebiny manokana. Ny sasantsasany amin'ireo botsika dia mikarokaroka ny tranonkalanao mba handresy ny serasera ao amin'ny tranonkala ary hampitombo ny fandanian'ny tompon'ny tranonkala.
Tsy mety ny miteny fa botsikao ny doka Google dia nesorina tao amin'ny Google Analytics, ary tsy mila manova ny toe-javatra misy anao ianao. Na izany aza, ireo karazana botsika hafa dia sarotra ny miatrika ary tsy manaraka ireo toro-lalana izay nasongadina ao amin'ny tranokala robots.txt ao amin'ny tranokala, na amin'ny meta tags. Mitazona ny pejy web anao izy ireo ary manome vokatra mahatsiravina. Botsiho tsara, anefa, misoroka ny fangatahana tsy alefa any amin'ireo mpanolotra Google Analytics mba hitazonana sy hiarovana ny tranokalanao. Amin'izao andro izao, ny bota ratsy dia mitentina mihoatra ny telopolo isan-jaton'ny tranonkala rehetra, araka ny tatitry ny Incapsula. Voatery ny mitady vahaolana mba ahafahantsika manilaka ireo boka ratsy avy amin'ny Google Analytics sy ny tatitra ataony. Izany dia hamonjy ny angon-draketrantsika sy ny tranokalantsika avy amin'ny fifamoivoizana sandoka ary ny bots.
Inona no azo atao amin'izany?
Misy fomba maro samihafa hanesorana ny bots amin'ny Google Analytics. Ny sasany amin'ireo zavatra tokony hotadidinao dia:
1. Tokony hijery ny boaty ao amin'ny fizarana Admin View ianao mba hanesorana ireo bota fantatra sy tsy fantatra.
2. Tokony hanaisotra ny bots ary hanakana ny adiresy IP
3.Ianao dia afaka manaisotra bots amin'ny fanampian'ny mpampiasa mpampiasa, izay ahazoana antoka fa ho mora kokoa sy haingana kokoa ny famaritana ny famantarana.
Amin'ireto zavatra ireto ao an-tsaina dia azonao atao ny mamonjy mora foana ny tranokalanao amin'ny bots ampiasaina.